အင်းဆက် – My Blog
လုံးလုံး သမီး အမည်က ( လုံးလုံး ) နာမည်နဲ့ လိုက်အောင် ခန္ဓာကိုယ်က လုံးပြီး ငရံ ကိုယ်လုံး အရပ်က ၅ပေ၄လက်မ အများမြင်မှ အပျူ ိလို့ ထင်ရပေမဲ့ ယောက်ကျားနဲ့ ရှိတယ် ဆန္ဒတောင်း တ နေသမျှ လုံးယောက်ကျာ်းက လက်ဖျာခါခဲ့တဲ့ လုံးရဲ့ ရမ္မက်ဇော တွေက မထိမ်းနိုင် မတားနိုင်သလိုပေါ့ လုံးတို့ မှာ ကလေး ၃လ သားရှိတယ် လုပ်ငန်းက ရေလုပ်ငန်း ငါးဖမ်း စက်လှေနဲ့ ထွက်ရတယ် အင်းမှာ နေရာ တနေရာ ပေးပြီး နေခွင့်ပေးထားတယ်တနေ့ အင်းသူ အင်သားများကကဲ ” ” အားလုံးနားထောင်ကြပါ ဒီနေ့ မြို့က လုပ်ငန်း ပိုင်ရှင် အင်းသူဌေး… Continue reading လုံးလုံး
Categorized as အင်းဆက် Tagged လုံးလုံး
သူငယ်ချင်းကိုလိုးတဲ့စာ ငါ သိပ် အထီးကျန်တယ် သူငယ်ချင်း။ ဒါကြောင့်နင့်ကို ငါ ကိုယ်ချင်းစာတယ်” လို့ ကျွန်တော် ပြောလိုက်တော့ နွယ်နီက ကျွန်တော့်ကို အကြောင်သား ကြည့် နေတယ်။ “နင်က အထီးကျန်ရအောင် ရည်းစားကြီး ငုတ်တုတ်နဲ့လေ။ ငါက အသည်းကွဲနေတာဟဲ့” “ငါ့ရည်းစားက နိုင်ငံခြားမှာလေ။ ကြာပြီဟ။ ငါက ရည်းစားရှိတယ်လို့ နာမည်ပဲရှိတာ။ ငါပြောတာ နင်သဘောပေါက်ပါတယ် နွယ်နီရာ” ကျွန်တော်နဲ့ နွယ်နီက ငယ်ငယ်ကတည်းက မောင်နှမလို နေခဲ့တဲ့ သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ပါ။ ကျွန်တော်က ငယ်ငယ်ကတည်းက ရည်းစားရှုပ်တယ်ဆိုပေမဲ့ နွယ်နီ့ကိုတော့ မောင်နှမလိုသာ ဆက်ဆံတယ်။ ယောကျၤားလေး သူငယ်ချင်းတွေလိုပဲ ချစ်တယ်။ ဟိုကောင်တွေနဲ့ ဘောလုံးသွားမကန်ဖြစ်တဲ့ နေ့ဆို နွယ်နီ့ အိမ်သွား၊ သူကျွေးတဲ့မုန့်စား၊ ခွေကြည့်နေကျ။ နွယ်နီက ကျွန်တော့်ကို… Continue reading သူငယ်ချင်းကိုလိုးတဲ့စာ
Categorized as အင်းဆက် Tagged သူငယ်ချင်းကိုလိုးတဲ့စာ
တော်လို့ စမူဆာ ဆုချတာ တပ်ထဲတွင်း အစည်းအဝေး စောပြီးလို့ အားနေတဲ့ တစ်ရက် ဗိုလ်ကြီး မျိုးစည်သူ ပျင်းလို့ ဖေ့ဘွတ် ဖွင့်ပြီး ဟိုပွတ် ဒီပွတ် လုပ်နေတယ်။ မျိုးစည်သူ က အရာရှိငယ် လူပျိုဆောင်မှာ နေတယ်။ အရာရှိဆိုတော့ သီးသန့် အခန်း ရတယ်လေ။ တပ်ရင်းမှူး နဲ့ အခြားအရာရှိတွေ တိုင်းမှူးလမ်းကြောင်း ပါသွားလို့ မျိုးစည်သူ သိပ်အလုပ်မရှိဘူး။ အရာရှိလူပျိုဆောင် ဟာ တိတ်ဆိတ်လို့။ နေ့ခင်းက စားဖိုမှူးလာပို့သွားတဲ့ ပဲဟင်းနဲ့ ငါးကြော်နှပ်ကိုတောင် ပျင်းလို့ မစားသေးဘူး။ ဗိုက်ကလည်း မဆာသေးဘူးကိုး။ ဘီယာသောက်ရအောင်လည်း နေ့ခင်းကြီးကို မျိုးစည်သူ မသောက်တတ်။ ပျင်းစရာကောင်းလှတဲ့ နေ့ခင်းပါလား။ ဖေ့ဘွတ် ပေါ်က မော်ဒယ်တွေကို လိုက်ပြီး ရွေးကြည့်နေလိုက်တယ်။ မော်ဒယ်တွေပုံကိုသာ… Continue reading တော်လို့ စမူဆာ ဆုချတာ
အပျိုနဲ့ဘယ်ဟာ ပိုကြိုက်လဲ ဘေးခန်း က စော်ကြီး ကို က သူသတိထားမိနေတာ ကြာပြီ ထိုသို့ သတိထားမိရလောက်အောင်လည်း စော်ကြီးက အိုးတောင့်လေသည် ။ ဖင်ကြီးတွေများ မှုတ်ပြီးလိုးလိုက်လို့ကတော့အို ဘာပြော ကောင်းမနည်း … သို့သော် ထိုစော်ကြီးက ယောကျၤား ရှိလေသည် ။ သူများသားမယားကိုဆို သူမပြစ်မှား ဒါပေသိ ရံဖန်ရံခါ ထိုအမျိုးသမီးက သူ့ကိုလိုက်လိုက်ငေးနေသည်ကတော့ သူ့ကို စိတ်ဝင်စားသလိုလိုသူထင်မိသည် ။ကဲ … ဇာတ်လမ်းဖတ်တဲ့ မိတ်ဆွေတွေသိအောင် စော်ကြီး ပုံစံကိုပြောပြပါမည် ဒါမှ ဒီစာဖတ် မျက်လုံးထဲတွင်မြင်ယောင်ပြီးတဂွင်းရလည်း မနည်းဖူးမလား လို့ … စော်ကြီးက အသက် ၃၂ လောက်ဖြစ်ပုံရသည် ။ တင်ပါး တလုံးတလုံးမှာ အုန်းသီးလုံးလောက်ရှိပုံရပြီး အနောက်သို့ ကောက်ချိတ်နေလေသည် ရင်သားများကတော့… Continue reading အပျိုနဲ့ဘယ်ဟာ ပိုကြိုက်လဲ
Categorized as အင်းဆက် Tagged အပျိုနဲ့ဘယ်ဟာ ပိုကြိုက်လဲ
ကိုယ့်ထိမှနာ မေမြတ်တယောက်အ ခန်းထဲတွင်ငိုနေရှာသည် အကြောင်းကား သူ့မထံသို အင်တာနက်မှ သူ့မကိုကို ကျော်ဇင် နဲ့မိန်းမတယောက် ကဲနေကြွတဲ့ပုံတွေကို တယောက်ကပို့လိုက်သောကြောင့်ဖြစ်သည် ရက်စက်လိုက်တာကိုကိုရယ် သူ့မှာတော့ချစ်လွနိးလို့အပျိုဘဝလေးပေးအပ်ခဲ့မိသည် ပုံထဲတွင် ကို့ကိုက အဲ့မိန်းမနောက်မှနေပြီးနို့တွေကို ကိုင်ခါကလိနေသည် နောက်ပုံတွင် ကိုကိုဟာကြီးကို အဲ့မိန်းမကစုတိပေးနေပုံဖြစ်သည် မေမြတ်ကိုကို့ကိုစိတ်နာသွားသည် သူတောင်သစ္စာမရှိသေးတာ ငါလဲကဲပြမယ်လို့ စိတ်ရူးပေါက်ပြီး မလုပ်သင့်တာတွေလုပ်မိတော့သည် ရေချိုးအလှပြင်ပြီး စလင်းဘက်ထဲ စကက်အတိုနဲ့အကျီၤ လည်ဟိုက်အကျပ်လေးထည့်ခါ အိမ်ကို သူငယ်ချင်းအိမ်မှာစာလုပ်ဖို့ညအိပ်မယ်ဆိူပြီးထွက်ခဲ့တော့သည် စူပါမားကပ်တွင် သူမအိမ်နေရင်းအဝတ်ကို ယူလာတဲ့စကပ်အတိုနဲ့အင်္ကျီအကျပ် နဲ့လဲဝတ်လိုက်တော့သည် ပြီးတော့ မြို့စွန်ရှိစရိုက်တွေပေါတဲ့ မြို့နယ်သို့ရောက်တဲ့ကားကိုစီးလာသည် ရောက်တဲ့အချိန်က ညနေ ၆ ခွဲလောက် မှောင်စပြုနေပြီ ကားဂိတ်တွင်လူမရှိ လမ်းတွေကမှောင်စပြုပြီး အိမ်တွေကလဲ သိပ်မရှိပေ မေမြတ်လဲ ဓာတ်ပုံထဲမှ ကိုကိုနဲ့ဟိုမိန်းမပုံကိုပြန်မြင်ရောင်ပြီး ဒေါသထွက်လာခါ ကားလမ်းအတိုင်းခပ်သွက်သွက်လျောက်လာမိသည် ခနကြာတော့ လမ်းကြားလေးတခုတွေ့သည် အိမ်ပျက်ကြီးတလုံးနဲ့ကွင်းကြီးသာရှိပြီး… Continue reading ကိုယ့်ထိမှနာ
Categorized as အင်းဆက် Tagged ကိုယ့်ထိမှနာ
သူကောင်း ကိုကောင်း ကျွန်တော် နာမည်အောင်ချမ်းသာဖြစ်ပြီး အသက်ကတော့ ၂၂နှစ်ပါ ကျွန်တော်ဟာ ငယ်ငယ်ကတည်းကရပ်ကွက်ထဲက အကြီးတွေအရက်သမားတချို့တွေနဲ့ပေါင်း ပြီးငယ်ငယ်ကတည်းကဆေးလိပ်သောက် အရက်သောက် ဖာချ နဲ့အချိန်ကုန်လွန်လာသူဖြစ်ပါတယ် ..ငယ်ဘဝဆေးလိပ်ကွမ်းအရက်ကို၁၇နှစ်လောက်ကတည်းက စသုံးလာတဲ့အတွက်ကြောင့် ရူနာရိူက်ကုန်းပုံစံဖြစ်ကာ အသိမိုက်ကာ ဆိုးသွမ်းနေမိပါတယ်….သူငယ်ချင်းတွေလာခေါ်လျှင်အရက်ဝိုင်း အသုဘအိမ်ဖဲဝိုင်း တခါတလေ တံတားအောက်ဖာခေါင်းများနဲ့ပေါင်းကာ ဖာချလိုက်နဲ့မိဘအပေါ်မသိတတ်မလိမ်မာ ဘုရားတရားမသိနဲ့ အချိန်ကုန်လျက်ရှိပါသည်။ ထိုစဉ် ကျွန်တော်ဧ။်ဘဝကိုပြောင်းလဲပေးသောသူမှာ ဦးဇေယျဆိုသော အသက်၅၆နှစ်ခန့်လူကြီးတစ်ဦးဖြစ်သည်။သူသည် စံပြဈေးအနီးနား စီမံကိန်းတွင်နေထိုင်ပြီးကျန်းမာရေးအရ ပင်စင်စားတစ်ဦးဖြစ်သည် ။ ကျွန်တော်ငမိုးရိပ်ချောင်းတဖက်ကမ်း ထန်းရည်သွားသောက်ပြီးအပြန်တွင်မူး ပြီး၇ဆူဘုရားအနီးအရိပ်ရခုံတစ်ခုတွင်ထိုင်နေရာ ဦးဇေယျမှာလည်း ထိုနားက ဘုန်းကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်းသို့လာရာမှ ဆုံဖြစ်ရာ အသိမိတ်ဆွေဖြစ်သွားခဲ့ကြပါတယ် ထို့နောက်ကျွန်တော်ဟာအားလပ်ရပ်သူ့ဆီသွားကာ သူအပြောများနားထောင်ကာ အပျင်းပြေစကားသွားပြောလေ့ရှိပါတယ် တနေ့နေ့လည်ခင်းတချိန် မိုးရွာနေစဉ် မိမိမှာပျင်းလွန်းသောကြောင့် ဦးဇေယျဆီသွားမယ်ဆိုကာ ဘတ်စ်စီးကာထွက်လာခဲ့ပါတယ်…ဘတ်စ်မှာလူအင်မတန်မှကြပ်၍ စပယ်ယာမှ… အနောက်ကလေးကိုတိုးပေးကြပါဦးခင်မျ နေရာအလွတ်တွေရှိပါတယ်…ဆို၍ ကျွန်တော်လည်းတိုး၍ တိုး၍အသက်၂၅နှစ်ခန့် ခန္ဓာကိုယ်ပြည့်ပြည့်ကောင်မလေးတစ်ယောက်နောက်သို့ရောက်သွားလေတော့တယ် ကျွန်တော်လည်းပထမတွင်စိတ်မပါသော်လည်း… Continue reading သူကောင်း ကိုကောင်း
Categorized as အင်းဆက် Tagged သူကောင်း ကိုကောင်း
ပန်းကောင်း အညွန့်ချိုး သ မီးလေးအရွယ်ရောက်လာတော့ မကေသီတစ်ယောက်စိတ်တွေပူလာ ရပြီ။ခုခေတ်ကလေးတွေကကဲမှကဲ ဆက်စ် ကိစ္စကိုထမင်းစားရေသောက် လုပ်သလိုဖြစ်နေပြီ။အချိန်ပိုင်းနှင့် ငှားတဲ့ဟိုတယ်တွေကလဲပေါမှပေါ ဆိုသလို အွန်လိုင်းပေါ်မှာတင်ချိန်း ဆိုနေကြတာ။တယ်လီဖုန်းဆင်းကဒ်တွေကလဲပေါမှပေါ။လူမှု့ဆိုရှယ်ဖေ့ဘွတ် တွေသုံးနေကြတော့ ခုခေတ်ကလေး တွေထိန်းချုပ်ရတာမလွယ်တော့ပါ ဘူးလေ။ ကိုယ်တွေခေတ်တုန်းကနဲ့မတူဘူး။ တစ်ခုခုဆိုရင်အင်တာနက်ပေါ်ရောက်သွားပြီ။ အဲဒီခါမှအိမ်ကလူတွေသိပြီးအရှက်တကွဲအကျိုးနဲတွေဖြစ်ရရတော့တယ် ။တွေးနေတုန်းရှိသေးတယ် သမီးလေးကစကပ်အတိုအပြတ်နဲ့ မျက်နှာမိတ်ကပ်လိမ်းပြီးအိမ်ပေါ်က ဆင်းလာတော့ “သမီး ညည်းဘယ်သွားမလို့တုန်း” “သူငယ်ချင်းနဲ့ချိန်းထားလို့မာမီ’ “ဘယ်ကသူငယ်ချင်းလဲသမီး” “မာမီကလဲအပြင်တစ်ခါသွားရင် စစ်လားမေးလားနှင့်သမီးအသက် ဆယ့်ရှစ်နှစ်ပြည့်နေပြီ” “ဟဲ့နင့်ဟာနင်ဆယ့်ရှစ်နှစ်မကလို့ ရှစ်ဆယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်နင်ဟာငါ့သမီးပဲ” “မာမီ့သမီးမာမီသမီးပေါ့ဒါပေမယ့် နေရာတိုင်းတော့သမီးကိုမချုပ်ချယ် ပါနှင့်မာမီ” “ငါချုပ်ချယ်နေတာမဟုတ်ဘူး၊ မသူတော်တွေနဲ့တွေ့မှာစိုးလို့ဟေ့” “သမီးမှာလဲစဉ်းစားတတ်တဲ့ဦးနှောက်ရှိတယ်မာမီ” “အေးနင်တို့ဦးနှောက်နှင့်မျက်လုံးက မျက်တောင်မွေးတဆုံးတောင်ကြည့် တာမဟုတ်ဘူး၊လူဆိုတာရှေ့ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာမသိနိုင်ဘူး” “မာမီ ဓာတ်ပြားဟောင်းတွေလာဖွင့်မနေနဲ့တော့၊မိန်းကလေးဆိုတာဗိုင်းကောင်းကျောက်ဖိနေရမယ်၊ ကိုယ့်ဘဝကိုထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရမယ်၊ ဒါတွေပဲပြောမှာမဟုတ်လား၊ တော်ပါပြီသမီးအာ့တွေကိုနားရည်ဝ နေပြီ” ပြောရင်းဆိုရင်းထွက်သွားသော သမီးကိုကြည့်ရင်းသက်ပြင်းချ လိုက်မိသည်။ ဒေါ်ကေသီတစ်ယောက်ဝဋ်လည်ခြင်းပေလားမသိပေ၊မိမိ အပျိုဘဝတုန်းကလဲမေ့မေ့စကား နားမထောင်ခဲ့လို့အိမ်ထောင်ကျမှ စိတ်ဆင်းရဲမှု့တွေကိုခါးစည်းခံနေရ… Continue reading ပန်းကောင်း အညွန့်ချိုး
မှိန်းနေယုံပဲ အ ဟင်း… အား… ကောင်းလိုက်တာ အောင်ရယ်…. ဘယ်လိုတွေ လုပ်နေတာလဲ” တိတ်ဆိတ်သော ညနှင့် အခန်းငယ်လေးထဲတွင် ရမ္မက် သံတို့ဖြင့် လွှမ်းခြုံနေပေသည်။ ကိုအောင်တစ်ယောက် သူမိန်းမ အင်ကြင်းကို ကုတင်ပေါ်တွင် ပေါင်နှစ်ချောင်းဖြဲပြီး အားရပါးရနှင့်ကို စိတ်လိုလက်ရ မှုတ်ပေးနေပေသည်။ လိင်စိတ်ကြီးသူများပီပီ အရွယ်မှာလည်း နှစ်ဆယ်ငါးပတ်ဝန်းကျင် သာဖြစ်ကြသောကြောင့် ကာမအားအကောင်းဆုံး အရွယ်လည်း ဖြစ်ကြလေသည်။ ကိုအောင်သည် ဝါရင့်ဘာဂျာ သမားပီပီ အမှုတ်မှာတော့ စံထားရလောက်ပေသည်။ . ထို့အပြင် အလင်းရောင်အောက်တွင် အင်ကြင်းရဲ့ ပြောင်ရှင်းနေသော စောက်ဖုတ် ဖောင်းဖောင်း ကြီးကလည်း ကိုအောင်ရဲ့ အာရုံတွေကို နှိုးဆွနေပေသည်။ ” အား… ရှိ” အစေ့ကို ရေခဲချောင်း စွဲသလို စွဲစုတ်လိုက် အကွဲကြောင်းကို လျှာဖြင့် ကစားလိုက်… Continue reading မှိန်းနေယုံပဲ
Categorized as အင်းဆက် Tagged မှိန်းနေယုံပဲ
ငယ်ငယ်က လုပ်ဖော် ကိုင်ဖက်
ငယ်ငယ်က လုပ်ဖော် ကိုင်ဖက် ည ၁၂ နာရီကျော်နေပြီ ယောင်္ကျားဖြစ် သူပြန်အလာကို စောင့်နေရတာ သီရိတစ်ယောက်သစ်ကုလားအုပ်ဖြစ်တော့မယ် အခုတလောစီးပွားရေးကလည်းသိပ်အဆင်မပြေ အဲ့ဒါကိုအကြောင်းပြပြီး လင်တော်မောင်ကမှုးမှုးရူးရူးနဲ့ ပြန်လာ ပြီးရင်တခါထဲအသေကောင်လိုတန်းထိုးအိပ် သီရိခမျာ အရက်နံ့ကတထောင်းထောင်း အိပ်ရင်းဟောက်လိုက်တာကလည်း မီးရထားစက်ခေါင်းကြီးအလား သူ့ဘေးမှာလှဲရင်း အိပ်မရတဲ့ညတွေလည်းများနေပါပြီ အိပ်လို့မရတိုင်း ကိုယ့်အဖုတ်ကလေးကိုယ် လက်ကလေးနဲ့ကလိလိုက် နို့ကလေးကို အသာလေးချေလိုက်နဲ့ အာသာဖြေနေရတာပေါ့။ ဒီယောင်္ကျားကိုယူရတာ အိမ်ထောင်ရေးသုခလည်း အပြည့်အဝမခံစားရ ပြီးတော့မငတ်ရုံတမယ် နေရတော့ တခါတလေ ယူမိတာမှားပြီလို့တောင်တွေးမိသေးတယ်အိမ်ကလည်း သဘောမတူတဲ့သူနဲ့ယူလို့ဆိုပြီး ပစ်ထားတာ အခုမှအိမ်ပြန်သွားရင်လည်း အိမ်ကပြန်လက်ခံမယ်မထင်ဘူး။ သီရိဘဝများ ရှေ့လည်းမတိုးသာနောက်လည်းမဆုတ်သာ ဆိုသလိုအကျဉ်းအကြပ်ထဲရောက်နေတာပေါ့ဟော ကိုယ်တော်ချောပြန်လာပါပြီ အသံကိုကအာလေးလျှာလေးနဲ့ မူးနေပြီပေါ့ အင်း ဒီညလည်း ငတ်ပြန်ပြီဒီညတော့ သူတစ်ယောက်ထဲမဟုတ်ဘူး လူတစ်ယောက်သူ့ကိုတွဲပြီးပြန်လာတယ်။ ပထမတော့မျက်နှာကို သေချာမမြင်ရဘူး နောက်သူ့မျက်နှာကိုမြင်လိုက်ရတော့ ကျမအံ့သြသွားတယ် သူ့နာမည်က မောင်ခိုင်တဲ့… Continue reading ငယ်ငယ်က လုပ်ဖော် ကိုင်ဖက်
Categorized as အင်းဆက် Tagged ငယ်ငယ်က လုပ်ဖော် ကိုင်ဖက်
မြင်သူစွဲမယ့်ဘော်ဒီ ဇတ်လမ်းက.. ဒီလိုဗျ…….. ကျွန်တော်က ပထမနှစ်ကျောင်းသားပါ (…)မေဂျာပေါ့ဗျာ။ ကျွန်တော်နှင့်အခန်းတူတဲ့ သဉ္ဇာကို ကျွန်တော်က အရမ်းကြွေမိပါတေဗျာ။ သူကလည်း အရမ်းကို ပွင့်လင့်သူလေဗျာ။ ကျောင်းကို သူလာရင် ကြွေတဲ့ဘဲတွေကလည်းပရမ်းများတာကိုဗျ။ သူကကျွန်တော့လို ကောင်ကို သိပ်ဂရုမစိုက်ပေမဲ့လည်း ကျွန်တော်က သူ့ကိုဂရုစိုက်ပြီး သူလိုအင်သမျှကို တတ်နိုင်သမျကြိုးစားပေး၊ အနေနီးတော့ ချစ်သူဖြစ်သွားကြပါတေဗျ။ ဒါပေမဲ့လည်း ငွေကြေးမရှိ ဆင်းရဲတော့လည်း တစ်ခါတစ်ခါ စကားများကြ ရန်ဖြစ်ခဲ့ပါတေဗျ။ သူကကျွန်တော့ကို…. .. အောင်ဇော်..နင်နှင့်ငါပြတ်ပြီ …. ပြောပြီး ပြတ်စဲသွားကြပါတေဗျ………….. ကျွန်တော့အမေနှင့် ကျွန်တော့သူငယ်ချင်းတွေက အားကုန်ပြီး အမျိုးမျိုးဘဲ နှိစ်သိမ့်ပေမဲ့ ကျွန်တော်က သူ့ကိုချစ်မိနေတော့လည်း သူ့ကိုပြန်လိုက်ပြီး တောင်းပန်တော့ ပြန်အဆင်ပြေသွားကြပါတေ၊ အခုလာမဲ့ တနင်္ဂနွေရက်မှာ သူနှင့်အတူ ရုပ်ရှင်သွားဖို့ ပိုက်ဆံလိုလာတော့ ကျွန်တော့သူငယ်ချင်းဖိုးပြည့် ဆီနေ ပိုက်ဆံချေးဖို့… Continue reading မြင်သူစွဲမယ့်ဘော်ဒီ
Categorized as အင်းဆက် Tagged မြင်သူစွဲမယ့်ဘော်ဒီ